Euro NCAP ရဲ့စစ်ဆေးမှုအရ ၂၀၁၇ ရဲ့အလုံခြုံဆုံးကားအဖြစ်ရပ်တည်နေတဲ့ Volvo XC60! – AutoMyanmar
Volvo XC60 ဟာဆိုရင် ၂၀၁၇ Euro NCAP (New Car Assessment Programme) ရဲ့လုံခြုံမှုအရှိဆုံးဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံမှုအရှိဆုံး ဆု မရခင်တည်းက XC60 ဟာ ၂၀၁၇ ရဲ့ performance ကောင်းမွန်တဲ့ off-road vehicle တွေထဲမှာပါဝင်နေပြီးပါပြီ။ Volvo အနေနဲ့ Performance ကောင်းမွန်တဲ့ Off-road vehicle မှာပါဝင်တာ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ရဲ့ performance ကောင်းမွန်တဲ့ off-roader vehicle မှာလည်း XC90 နဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ Volvo ဟာ Euro NCAP ပေးအပ်တဲ့ ဆုကိုရရှိခဲ့တာ XC60 နဲ့ပထဉီးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ရှေ့နှစ်ကပဲ Volvo ရဲ့ V40 နဲ့ Small Family Class မှာဆု ရရှိခဲ့တာပါ။ အဲ့တော့ Volvo ဟာရာဇဝင်နဲ့ဆုတွေရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Volvo ရဲ့ XC60 ကတော့ Adult Occupant category ရဲ့ Off-road class မှာဆိုရင် ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ Safety Assist မှာဆိုရင် ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း အစရှိတဲ့စံနှုန်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ XC60 သာမက S90 နဲ့ V90 တို့ကလည်း ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း နဲ့ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်း အထိရရှိခဲ့တာပါ။ Volvo ကားတွေရဲ့ ၂၀၁၇ Euro NCAP စံနှုန်းမှာ ၉၀ အောက်မရှိတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
XC60 ဟာEuro NCAP ဆီကဆုမရခင်အချိန်မှာ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဂျပန် Car of the Year ဆုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ UK ၂၀၁၇ Car Tech မှာလည်း Best Safest Car, Best Safety Technology နဲ့ Best Sat-Nav (မြေပုံနှင့်ဆိုင်သော) စတဲ့အမည်တွေနဲ့ ဆုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂၀၁၇ UK’s Professional Driver မှာလည်း Luxury SUV of the Year အမည်နဲ့ဆုရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ၂၀၁၈ မှာပါ။ ၂၀၁၈ North American Utility of the Year ဆုအတွက် XC60 ဟာ finalist ၃ ဉီးထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ရလဒ်ကိုတော့ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့မှာကြေညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ Volvo အတွက် Malin Ekholm ရဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ရည်မှန်းချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြောကြားချက်တွေကိုကြည့်ရင် Volvo ဟာ လုံခြုံမှုကိုအရမ်းဉီးစားပေးတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ Malin Ekholm ဟာ Volvo Cars Safety Centre ရဲ့ Vice President တစ်ဉီးပါ။
ရလဒ်တွေကိုကြည့်ရင် Volvo ဟာ ၂၀၁၇ အတွင်းမှာတော်တော်အောင်မြင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ၂၀၁၈ မှာရောအခုလိုအောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်မလား ? Malin Ekholm ရဲ့ Volvo အပေါ်ထားရှိတဲ့ ၂၀၂၀ ရည်ရွယ်ချက်ကရောတကယ်ဖြစ်လာမှာလား ? အစရှိတာတွေကို ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
The new Volvo XC60 is 2017’s overall safest car in Euro NCAP safety testing!
.#volvocars #volvo #xc60 #ncap #congratulations pic.twitter.com/t28jgVIRqR
— Volvo Claytons of Mansfield (@Claytonsvolvo) January 11, 2018